Ergaa biyyarraa nugahe: “Kana qillensarraa naaf olchii-Qeerroo – Kichuu
HomeNewsAfricaErgaa biyyarraa nugahe: “Kana qillensarraa naaf olchii-Qeerroo
Ergaa biyyarraa nugahe: “Kana qillensarraa naaf olchii ( Baqqalaa Goonfaa )jedhamaa dhalootaan g/sh/l/aanaa gindaabarti ganda Dirree Faajjitti dhalate. Haa tahuu malee sadarkaa dargagummaa isaa irraa kaasee hojii basaasummaa hojjetaa tureefi kaan jirudhaa …. universiitii Dabra Maarqos irraa baraa 2002 eebbiffaamee Baardaar yuuniverstittii security (jaal-deemtuu mootummaa kana) tahuun barattotaa oromoo achitii argamaan hiisisaa fii ajjechisiisaa turee ittuumaa fufuudhaan godinaa sh/l/a/Meettaa Roobiiti ramadamuun wajj DhDUO (OPDO) keessaatti ijaarsa liigii dargagootaa tahuun gootota qeerroo Meettaa hedduu mana hidhaattii guursisaa turee. Haa tahuu maalee, bara 2008 keessaa of sodaatee garaa magaalaa Holotaatii jijjiiramee dalagaa isaa duraanii hojjetaa turee …yeroo ammaa kanatii barnoonnii mstrin isaa kennamee Unversiitii Ambootii barataa jira. Kaanaaf, gootota qeerroo Oromiyaa ykn qeerroo Amboo biraan na gahii addaarrakee….”
Dechesa Beeka-Bul/Guder kan ture.yeroo amma kana Bul/God/sh/Lixaa ta’ee hojechaa jira. TPLF waliin ta’ee Beker Shale jalatti qinda’ee Godinichaa dabarsee diinaaf kan laachaa jiru
Soboksa Mulatu- sad Federalatti Basaasaa God/ Sh/Lixa.Dhalataa naannoo guder Ganda QOt/bul Hadharsaa Biilaa. -Bara 1997 HLh tti Haramaya university tti ilmaan oromoo lafa irra ficcisiisaa kan ture ,sana booda security Federaalaa ta’ee Amboo tti ramadamee kan hojechaa jiru.konkolaataa ramadameef isaan hojechaab jira. Dechesa Beka Waliin hiriyaadha. Nama naannoo tokootti.yeroo amma kana Dureeyii oromoo fi qeerroo fi Baratoota kan hiisisaa jiruu isa akka ta’ee beekamee jira.
Yered Teshoma Geneti.Amboo ganda 01,Barsiisaa High school Jibaaat, Amboo, keessatti barsiisootaaf barattootaa basaasee diinaaf kan dabarsaa ture. -Sana booda gara muudamaatti fiduun barreessaa kantiibaa magalaa Amboo ture. -sana booda bara 2008 universty Amboo tti ijoollee akka basaasuu fi basaastoota university Amboo akka qindeessu ramadamee hojechaa kan ture. -yeroo of sodaatee Amboo gallakisee Finfinnee jirachaa kan jiru.
Selamon Gebre-Bara dheeraaf High school AMboo barataa fi basaasaa kan ture. -Barataa Jegema Bedene fi Kebeda Bedese Irko High school Amboo tti bara 1998 ajjeesiise
Tilahun Homa- HIV positive kan ta’ee jiru. -yeroo ammaa police un Ambo keessa hojeechaa kan ture -Amma ol gudisanii gara biiroo tti galee jira -Mucaa shashamannee tokko fi kan biro maqaa isaanii yeroof beekuu hin dandeenyee kan university Amboo tti bara 2006 ajjeese.
Geshew UN Amboo tti itt/gaf/poolisootaa ta’ee hojechaa kan jiru
Tedesa Fedeasa-W,DH,D,U,O GOD/sh/lixa keessa hojeeta -BUl/Dirree incinnii kan ture -Ijoolee Inicinnii 12 ta’anii bara1968/1999 HLH tti Warra adda duree ta’anii ijoolee naannoo sana fi AMboo kan qindeesaa jirtanii isinii jechuun TPLF waliin ta’uun gara mana hidhaa Ziwayii qilinxoo tti hanga guyyaa har’a tti mana hidhaa jiru -sana booda W/lafa godinaatti itti gaafatamaa kan ture, -yeroo ammaa W,DH,D,U,O keessa jira
Gizew Tola- itti/w/qonnaa Aanaa Gindabaratii ,Kantiibaa magaalaa Amboo,Itt/W/Jallis God,Itti/mis/mag/fi construction god/sh/lixa,
Abebe Urgessa –Itt/cooperative dirree incinnii kan ture -yeroo ammaa kana w/cooperative God/sh/lixa keessa hojechaa jira
Mulugeta Reggasa Gadisa-Mana qopheessaa Amboo keessa basaasaa kan ture -yeroo amma kana barumsa mesters kenameef jira.
Mengistu Reggasa –basaasaa waggaa 25 guutuu Amboo basaasaa ture -jiraataa ganda Amboo 02 -Dhalataa ganda Q/Bulaa Kubee Qibaa
Turune Gadisa-Basaasaa waggaa 25 guutuu Amboo basaasaa ture -Dhalataa ganda Q/B Kubee qibaa
Getahun Debesa-W/Qonnaa GUder – Filannoo Bara 2002 Guder ganda Q/Bulaa Naga Filee (Tullu Dimituu) jedhamutti nama tokko ajjeesisee ture -Jereenyii isaa Amboo 01 Mana baruumsaa Addis katamaa cina -yeroo amma kana gudar fi Amboo basaasaa jira
Beza Dunfa-Jiraataa Amboo 01 -mana barumsaa Amboo baka adda addaa hojechaa ture -ijoollee ammana hin jedhamnee hisiisaa fi ajjechisaa ture -sana booda itt/w/daldalaa magaalaa Amboo -sana booda itti/IMX magaalaa Amboo
Zakariyas worku Mengesha – jiraataa magaalaa Gudar -Dechesa Beka waliin ta’uun gudar keessatti ramadamee hojechaa jira -sana booda ITT/gaf/w /lafa baadiyaa gudar
Abera Cimdi-Managera ganda QO/Bulaa Haaluu raaruu kan ture -sana booda Itti/gaf/Sivil service Guder -sana booda Itti/Nageenya Aanaa Gudar/ security
Dandana Lamu- Gudar Dura ta’aa ganda qon/bulaa Agamsaa dasoo kan ture -yeroo ammaa kana TPLF waliin kan hidhamanii fi kan ajjeefamanii mana geessee agarsiisee kan ajjeesiisuu isa kan ta’ee –
Getechew/Yosan/Bekela-D.A kan ture -bara 2008 barataa tokko magaalaa tokkee irrensaa jedhamutti AGZin Ajjechiseera – Sana booda yeroo ammaa itt/aanaa Bulchiinsa lafa Guder – Sana booda itti/bulchiinsa lafa Aanaa Libaan jawwee(Baabbicha)
Shibiru Celchisa-Barsiisaa mana barumsaa Gooroo soolee kan ture -Achuma magaalichaa tti barataa Obboleessa Deseleny Fayera jedhamuu AGZIN ajjechisee ture bara 2008 -yeroo ammaa kana Aanaa Guder tti guddisanii w/DH/D/U/O keessa hojechaa jira -AGZI waliin yeroo amma kana hojii basaasummaa isa itti fufee jira Kanaafuu jarreen kana waliin baayyeetu jira.garu akka qabatamaa tti wa’ee jara kana raga guutu qabina.”